Nooca Gacanta Kormeeraha Cadaadiska Dhiigga
Heerkulbeegga Hawada Infrared
Saaxiibbo badan ayaa weydiiya dhaqtarka, muxuu takhtarka isbitaalku u jecel yahay inuu isticmaalo qalabka elektiroonigga ee elektiroonigga ah, laakiin bukaanka looga qaado lacag si uu guriga ugu aado qalabka elektaroonigga ee elektromigga ah?
Xaqiiqdii, tani waa is faham la’aanteenna, ma jiro sharci noocaas ah, qalabka elektiroonigga ee hadda jira iyo meerkuriyada meerkuriga ayaa ku jira marxaladda guud, dhakhtarka ayaa ah waxa la isticmaalayo, haddii bukaanku isticmaali doonaan meerkurida sphygmomanometer, sidoo kale waxay isticmaali karaan meerkurida sphygmomanometer.
Marka la gaaro sannadka 2020, daryeelka caafimaad ee bilaashka ah ee meerkuriga waa la gaari doonaa, meerkurida sphygmomanometerna tartiib tartiib ayaa looga saari doonaa isbitaalada. Hadda waa uun marxalad ku meel gaar ah. Marka, isbitaalada, waxaan ku arki karnaa mararka qaarkood isticmaalka meerkurida meerkurida, mararka qaarkoodna isticmaalaya elektrooniga sphygmomanometer。
Saaxiibbo badan oo ku saabsan jiritaanka cadaadiska dhiigga elektiroonigga ah, tani waa lama huraan, maxaa yeelay kormeeraha cadaadiska dhiigga ee suuqa, waxaa jira dhibaatooyin qaar ka mid ah, inta badan cabbiraaddu sax maahan, marin habaabin, si jahwareer badan loogu keeno qof walba, sidaa darteed, dad badan ma aaminsana qalabka elektarooniga ah ee dhiig karka.
Dhab ahaantii kormeerayaasha cadaadiska dhiigga elektiroonigga ah ee ay adeegsadaan qoysaskeennu waa kuwo sax ah Dhammaan waa la soo dhaafay FDA, CE, ISO13485, Roahs iwm shahaadada.
Kormeerayaasha cadaadiska dhiigga elektarooniga ah waxay leeyihiin faa'iidooyin u gaar ah:
1. Meerkuri ma jiro, yareynta dhaawaca.
2, qalliin fudud, oo si sahlan loo baran karo, qofku sidoo kale wuu shaqeyn karaa.
3. Shaqada duubista cadaadiska dhiigga iyo shaqada qiyaasta garaaca wadnaha.
4, qiimaha ayaa ka saxsan, marka la barbar dhigo meerkurida sphygmomanometer sida wanaagsan.
5. Qalabka elektrooniga ee sphygmomanometer wuxuu adeegsadaa habka oscillographic, kaasoo cabbira cadaadiska dhiigga isagoo cabbiraya gariirka socodka dhiigga ee darbiga marinka dhiigga.
Sidee loo isticmaalaa qalabka elektarooniga ah cadaadiska dhiigga si sax ah?
1. Markaad ku degdegin inaad cabirto, nasasho illaa 15 daqiiqadood.Markaad cabireyso cadaadiska dhiigga, fadhiiso kursiga gadaal gadaal deggan oo deggan, jawi raaxo leh, dabeecadda jirka oo dhan waa la dabcay.
2. Ka qaad cududda kore ee gacanta, ku dheji bacda hawada cududda sare, calaamadduna waa inay u jeeddaa halbawlaha halbowlaha; Cidhifka hoose ee boorsada waa inuu ka saraa xusulka 2 ~ 3cm.
3. Gacmaha sare waa inuu la heer ahaadaa wadnaha. Kuleylka sii si aad uga ilaaliso gariir gariir jiilaalka.
4. Inta lagu jiro nidaamka cabbirka cadaadiska otomaatigga ah, bukaanku ma lahaan karo wax ficil ah, haddii kale cabirka cadaadiska ayaa ku guuldareysan doona mowjadda beenta ah ee dhaqdhaqaaqa muruqa darteed.
5. Inta udhaxeysa labada cabir waa inay ka badnaataa 3 daqiiqo, booska iyo booska waa inay ahaadaan kuwo iswaafaqsan sida ugu macquulsan.
La socoshada cadaadiska dhiigga waxay kuxirantahay iyaga u gaar ah, mitirka cadaadiska dhiiga elektaroonigga ah ayaa ah kaaliye fiican!